Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay weli ka fiirsaneyso dalab ay u dirto weeraryahanka Barcelona Antoine Griezmann inay tahay qorshe ay ku xoojiso haddii ay ku guuldareystaan ​​inay la soo saxiixdaan bartilmaameedka sare Harry Kane .
Tababaraha Citizens Pep Guardiola ayaa todobaadkan shaki galiyay heshiiska loo marayo weeraryahanka Tottenham Hotspur Kane, kaasoo lagu qiimeeyo in ka badan 100 milyan oo ginni.
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa heysata xidigo kale oo maanka ku haya inay buuxiyaan booska gooldhaliyaha ugu sareeya taariikhda Sergio Aguero , iyadoo Griezmann uu u muuqdo inuu ka mid yahay kuwa isha lagu hayo.
Mundo Deportivo ayaa soo jeedineysa in City ay xaqiiqsatay keenista ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France ee Barca inay wax badan macquul tahay marka loo fiiriyo inay waqti badan ku lumineysay isku day ay kula soo wareegeyso Kane.
Waxaa la sheegayaa in kooxda Guardiola ay awoodi karto inay si toos ah u soo iibsato Griezmann, inkastoo heshiis isku bedel ah sidoo kale laga fiirsan karo.
Barca, oo horay uga soo qaadatay Aguero iyo Eric Garcia City lacag la’aan, ayaa la sheegayaa inay xiiseynayaan Aymeric Laporte , Bernardo Silva iyo Joao Cancelo .
Griezmann ayaa ku dhameystay xilli ciyaareedkii 2020-21 ilaa 20 gool iyo 12 caawin tartamada oo dhan waxaana sidoo kale loo arkaa inuu bartilmaameed u yahay Juventus .